Padaethar - Page 363 of 375 -
ယခု သတငျးကို ( ကိုအေးမငျး ) စာမကျြနှာ မှ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ မြှဝေ တငျဆကျခွငျး ဖွဈပါသညျစဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ ဆားလငျးကွီးမွို့နယျ၊ ကြှနျးဖိုပငျကြေးရှာမှ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးကံတငျ+ ဒျေါဝငျးရီ…… သားကိုဆနျး+မမွမွသငျး၊ ကိုထှနျး+မသီတာစနျးမိသားစုမှကြှနျးဖိုပငျရှာရှိ အိမျခွပေေါငျး ၂၀၀ကြျောကို တဈအိမျလြှငျဆနျ တဈတငျးစီ လှူဒါနျးပါသညျ အုပျခြုပျရေးမှူး တဈဦးရဲ့ အခုလို မှနျမွတျလှတဲ့ လုပျရပျကွောငျ့ အှနျလိုငျးမှာလညျး လူအမြားက ဝမျးသာနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ…… သာဓုသာဓုသာဓုပါဗြာ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကွီး ကရြောကျနသေော ယခုလိုကာလမှာ ယခုကဲ့သို့ လိုအပျသော အလှူဒါန ပွုလုပျလူဒါနျးသော စတေနာရှငျ မိသားစု … ဒီထကျမက ဆထကျထမျးပိုး တိုး၍ လှူဒါနျးနိုငျပွီး ဘဝတဈလြှောကျလုံး ကနျြးမာပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနိုငျကွပါစကွေောငျး ကတြျောမြား ဆုမှနျကောငျးတောငျးအပျပါသညျ။ …..ယခုကဲ့သို့ ဂုဏျယူလေးစားဖှယျ … Read more
လပွညျ့ည ရောကျတိုငျး ရှတျဆိုရမညျ့ ငှပွေညျ့ ငှလြှေံ ခမျြးသာစမေယျ့ ငှဝေငျဂါထာ..
လပြည့်ည ရောက်တိုင်း ရွတ်ဆိုရမည့် ငွေပြည့် ငွေလျှံ ချမ်းသာစေမယ့် ငွေဝင်ဂါထာ ငွေဝင်ဂါထာဟု ကျော်ကြားသော ဒိဝါတပတိဂါထာတော် သဗ္ဗမင်္ဂလာဂါထာပါဠိတော် (၁) ဒိဝါ တပတိ အာဒိစ္စော ၊ ရတ္တိမာ ဘာတိ စန္ဒိမာ။ သန္နဒ္ဓေါ ခတ္တိယော တပတိ ဈာယီ တပတိ ဗြဟ္မဏော။ အထ သဗ္ဗ မဟောရတ္တိံဗုဒ္ဓေါ တပတိ တေဇသာ။ (၂) တာဒိသံ တေဇသမ္ပန္နံ ၊ ဗုဒ္ဓံ ဝန္ဒာမိ အာဒရံ။ နမက္ကာရာ နုဘာဝေန ၊ သဗ္ဗေ ပူရေ န္တု သင်္ကပ္ပါ။ ဂါထာတော် မြန်မာပြန် အနက် (၁) နေမင်းသည် နေ့အခါ၌သာ တောက်ပ၏။ လမင်းသည် ညဥ့်အခါ၌သာ တောက်ပ၏။ … Read more
2020 နှစ်ထဲမှာ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲမည့် နေ့ဖွားများ…။
(Zawgyi) 2020 နှစ်ထဲမှာ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲမည့် နေ့ဖွားများ (1)ကြာသပတေး အရာရာ ထိပ်ဆုံးရောက် အောင်မြင်မယ့်နှစ် ဖြစ်လတ္တံ …. အချစ်ရေးကိစ္စတွင် ကိုယ့်ထက်သာမယ့်သူ (သို့) ကိုယ့်ထက်ကြီးမယ့်သူနှင့် ဖူးစာဆုံရလတ္တံ …. နှလုံးသားနှင့် ဦးနှောက် ပေါင်းစပ်ကာ ကြင်ဖက်ရွေးလတ္တံ …. ငွေဝင်ကောင်းလတ္တံ ချေးထားငွေ များပြန်ရလတ္တံ ….မိခင်နှင့် ဝေးနေကြသူများ ပြန်ဆုံ ရလတ္တံ …. မိခင်၏ ကျန်းမာရေးကို စိုးရိမ်နေကြသူများ အထူးစိုးရိမ်ဖွယ် မရှိဖြစ်လတ္တံ ….. အထက်အရာရှိ ဆရာသမား ပူဇော်မစ ကူညီခြင်းကို ခံရ လတ္တံ …. အလုပ်အကိုင် တည်မြဲလတ္တံ ….. အိမ်ထောင်ကျ ကံကောင်းသော နှစ်ဖြစ်လတ္တံ …. အိမ်ထောင်စီးပွားတက်လတ္တံ …. ကျန်းမာရေး အထူးစိုးရိမ်ဖွယ် … Read more
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဘက်က ရှင်သာရိပုတ္တခြေတော်ရာ . . .
ဗီယက်​နမ်​နယ်​စပ်​ဘက်​..​တောင်​​လေးလုံး​ကျော်​ပြီး အမြင့်​​ပေ၂၈၀၀​ကျော်​မှာ.. ​ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကိုးကွယ်​ယုံကြည်​ ပူ​ဇော်​​နေကြ​သော.. လက်​ယျာရံ​ခြေ​တော်​ရာဖြစ်​ပါသည်​….. ..လက်​ဆင့်​ကမ်းစကားအရ.. သာရိပုတ္တမ​ထေကြီးလာ​ရောက်​ခဲ့စဉ်​အဓိဋ္ဌာန်​ထားခဲ့​ကြောင်း သမိုင်းရာဇဝင်​အရသိရပါသည်​.. ..သာရိပုတ္တမ​ထေရ်​မြတ်​ကြီးကို.. မည်​သူလဲဟု​မေးရာ ငါသည်​လက်​ယျာရံဟု​ဖြေကြားခဲ့ပြီး.. ယုံကြည်​ကုသိုလ်​ပွားနိုင်​​အောင်​​ခြေ​တော်​ရာ ထားခဲ့​ကြောင်း..ဗီယက်​နမ်​သမိုင်းရာဇဝင်​ကဆိုထား၏… သူတို့ဆီမှာ..ရှင်​သာရိပုတ္တ ရဟန္တာမြတ်​ကြီးကို.. ဘုရားကဲ့သို့ပဲယုံကြည်​ကိုးကွယ်​ကြပါသည်​.. ​ဒေသခံများက​ရောဂါဘယဖြစ်​ရင်​​သော်​၄င်း အခက်​ခဲအကြပ်​တည်းကြုံ​တွေ့ရင်​​သော်​၄င်း…. ထို​ခြေရာ​တော်​ဆီသို့အဓိဋ္ဌာန်​ပြုသွား​ရောက်​ ဆု​တောင်းပါက​အထူးပြည့်​​ကြောင်းသိရပါတယ်​…. သူတို့နိုင်​ငံက.. မင်းသားမင်းသမီး.နာမည်​ကြီး​တွေ နိုင်​ငံအကြီးကဲ​တွေကအစ.. သူတို့​အောင်​မြင်​ဖို့မကြာခဏသွား​ရောက်​ဆု​တောင်း ကြသည်​ဟုသိရပါတယ်​.. Unicode .ဗီယကျနမျနယျစပျဘကျ..တောငျလေးလုံးကြျောပွီး အမွငျ့ပေ၂၈၀၀ကြျောမှာ.. ဒသေခံတိုငျးရငျးသားမြားကိုးကှယျယုံကွညျ ပူဇျောနကွေသော.. လကျယြာရံခွတေျောရာဖွဈပါသညျ……. လကျဆငျ့ကမျးစကားအရ.. သာရိပုတ်တမထကွေီးလာရောကျခဲ့စဉျအဓိဋ်ဌာနျထားခဲ့ကွောငျး သမိုငျးရာဇဝငျအရသိရပါသညျ.. ..သာရိပုတ်တမထရျေမွတျကွီးကို..မညျသူလဲဟုမေးရာ ငါသညျလကျယြာရံဟုဖွကွေားခဲ့ပွီး.. ယုံကွညျကုသိုလျပှားနိုငျအောငျခွတေျောရာ ထားခဲ့ကွောငျး..ဗီယကျနမျသမိုငျးရာဇဝငျကဆိုထား၏… သူတို့ဆီမှာ..ရှငျသာရိပုတ်တ ရဟန်တာမွတျကွီးကို.. ဘုရားကဲ့သို့ပဲယုံကွညျကိုးကှယျကွပါသညျ.. ဒသေခံမြားကရောဂါဘယဖွဈရငျသျော၎င်းငျး အခကျခဲအကွပျတညျးကွုံတှရေ့ငျသျော၎င်းငျး.. ..ထိုခွရောတျောဆီသို့အဓိဋ်ဌာနျပွုသှားရောကျ ဆုတောငျးပါကအထူးပွညျ့ကွောငျးသိရပါတယျ…. သူတို့နိုငျငံက.. မငျးသားမငျးသမီး.နာမညျကွီးတှေ နိုငျငံအကွီးကဲတှကေအစ.. သူတို့အောငျမွငျဖို့မကွာခဏသှားရောကျဆုတောငျး ကွသညျဟုသိရပါတယျ..
အိမ်ထောင်ရေး၊အလုပ်၊ငွေကြေးကိစ္စ၊စီးပွားရေးများအဆင်ပြေစေရန် အိမ်ထောင်မိသားစုတစ်ခုတွင် စီးပွားရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ အဆင်မပြေပါကလည်း စိတ်သောကဖြစ်စေရာ ကြုံတွေ့ရတက်သည်။ ယခုဖော်ပြပါ ယတြာသည် အိမ်ထောင်ရေးသာမက အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးကိစ္စပါ အဆင်ပြေနိုင်သောယတြာဖြစ်ပါသည်။ ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် မေတ္တာစေတနာအပြည့်ထားပြီး ဆရာမင်းသုခကိုယ်တိုင်ရေးသားတွက်ချက်၍ ထိရောက်သော ယတြာကောင်း တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ်။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ မိမိမွေးနေ့ နံနက် ၉နာရီ ၄၅မိနစ်မှာ အုန်းညွန့် (6)ညွန့်၊ ရွက်လှ (၁၇)ညွန့်၊ မေမြို့ပန်း (၁၉)ပွင့် (သို့မဟုတ်) ပျဉ်းမ(၁၉)ရွက် ဘုရားတွင် ကပ်လှူပူဇော်ပြီး လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါ။ တနင်္လာသားသမီးများ မိမိမွေးနေ့ နံနက် ၉နာရီ ၁၅မိနစ်မှာ ကံ့ကော်(၁၅)ညွန့်၊ သပြေ(၂၁)ညွန့်၊ သင်္ဘောသီး(၁)လုံးအား အိမ်ဘုရားတွင် ကပ်လှူပူဇော်ပြီး လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါ။ အင်္ဂါသားသမီးများ မိမိမွေးနေ့ နံနက် ၉နာရီ ၂၀မိနစ်မှာ နှင်းဆီ(၁၀)ပွင့်၊ ဇီးညွန့် (သို့မဟုတ်) ဇော်စိမ်းညွန့် … Read more
တရားခံ..ဘယ်​သူလဲ​ ဟေ့ ​..!! အသက်​ ၅၅ နှစ်​​ရောက်​မှ..အသက်​ ၃၀အရွယ်​ကုမ္ပဏီစာ​ရေးမ​လေးနှင့်​ …အိမ်​​ထောင်​ပြုလိုက်​​သော ဘိုး​တော်​လူပျိုကြီးသည်​ …ဇနီးဖြစ်​သူ ကိုယ်ဝန်ရှိလာသည်ကိုသိလိုက်ရသောအခါ..အလွန်​ဝမ်းသာသွားပြီး..။ အိပ်​​ပျော်​​နေ​သောဇနီးသည်၏ဖုန်းကိုယူ၍ …သူမ၏ Contact List တွင်​ရှိသူများအား …”ငါ့မှာ …ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ” ဟုMessage ပို့လိုက်လေသည် ။ ခဏအကြာတွင် …ထိုသူများထံမှ ..Message များ ပြန်ဝင်​လာသည် ။ *အမေ – “ဟဲ့ သမီး …အရင်ဘဲနဲ့ ပြန်ဆက်နေတာလား ..” *ညီမ – “စိတ်မညစ်ပါနဲ့ မမ..ယောင်္ကျားနဲ့ရတယ်လို့သာ..ညာထားလိုက်..” *ကျောင်းနေဘက် – “ဟိုတစ်ခါဖြစ်တာ..ကြာပြီနော်..ငါ့ကိုတော့ ခေါင်းပုံမချနဲ့..” *လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် – “ဟုတ်ပါ့မလားကွာ..နှစ်ပတ်​ပဲ ရှိသေးတာ ..” *သူဋ္ဌေး – “မင်းတောင်းသလောက်ပေးမယ်၊ ငါနဲ့ရတယ်ဆိုပြီး..လျှောက်မဖွနဲ့..” *အိမ်နီးချင်း – “မနောက်ပါနဲ့..သဲရယ်ကိုယ်သားကြောဖြတ်ထားတာ ကြာပြီ..” … Read more
နားထောင်ကြည့်ပါ မရှက်တမ်း ရင်ဖွင့်သွားတဲ့ ကောင်မလေး အောက်ခြေက ပြည်သူတွေမှာ တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက် . . .
ဗွီဒီယိုဖိုင် အောက်မှာပါသည် နားထောင်ကြည့်ပါ … မရှက်တမ်း ရင်ဖွင့်သွားတဲ့ ကောင်မလေး … မနေ့က ကျိုက်မရော ဥတိုချောင်းရွာမှာသွားလှူရင်း အောက်ခြေက ပြည်သူတွေမှာ တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက် Zin Moe Unicode နားထောငျကွညျ့ပါ …မရှကျတမျး ရငျဖှငျ့သှားတဲကောငျမလေး … မနကေ့ ကြိုကျမရော ဥတိုခြောငျးရှာမှာသှားလှူရငျး အောကျခွကေ ပွညျသူတှမှော တကယျဖွဈနတေဲ့အဖွဈအပကျြ
မရှကျတမျး ရငျဖှငျ့သှားတဲ့ တိုငျးရငျးသူလေးပါ။ အောကျခွကေ ပွညျသူတှမှော တကယျဖွဈနတေဲ့အဖွဈအပကျြ
နားထောငျကွညျ့လိုကျပါ… မရှကျတမျး ရငျဖှငျ့သှားတဲ့ တိုငျးရငျးသူလေးပါ။ ဆငျးရဲတာ ရှကျစရာမဟုတျပါဘူး ညီမလေးရယျ။ ဘယျသူကမှ သူတို့ကို မချေါကွဘူးတဲ့..။ အဖကေ မရှိတော့ဘူး။ အမနေဲ့ပဲနတေယျ။ သမီးတို့မှာ အခုလိုလှူတာ ဒီတဈခါပဲရဖူးတယျတဲ့။ Video Credit – ZinMoe ကြိုကျမရော ဥတိုခြောငျးရှာမှာသှားလှူရငျး အောကျခွကေ ပွညျသူတှမှော တကယျဖွဈနတေဲ့အဖွဈအပကျြ နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ… မရှက်တမ်း ရင်ဖွင့်သွားတဲ့ တိုင်းရင်းသူလေးပါ။ ဆင်းရဲတာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး ညီမလေးရယ်။ ဘယ်သူကမှ သူတို့ကို မခေါ်ကြဘူးတဲ့..။ အဖေက မရှိတော့ဘူး။ အမေနဲ့ပဲနေတယ်။ သမီးတို့မှာ အခုလိုလှူတာ ဒီတစ်ခါပဲရဖူးတယ်တဲ့။ Video Credit – ZinMoe ကျိုက်မရော ဥတိုချောင်းရွာမှာသွားလှူရင်း အောက်ခြေက ပြည်သူတွေမှာ တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက် … Read more
အောငျလအနျဆနျ၏ ONE မဈဒယျဝိတျတနျး ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံကာကှယျပှဲ မေ ၃၀ ရကျသို့ ထပျမံရှဆေို့ငျး မွနျမာ MMA ကစားသမား အောငျလအနျဆနျ၏ ONE မဈဒယျဝိတျတနျး ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံကာကှယျပှဲကို ကမ်ဘာ့နိုငျငံမြား တှငျ ဖွဈပှားနသေညျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အခွအေနကွေောငျ့ ထပျမံရှဆေို့ငျးခဲ့ရသညျ။ အောငျလအနျဆနျ၏ ခနျြပီယံကာကှယျပှဲကို ဧပွီ ၁၀ ရကျတှငျ ကငျြးပရနျ စီစဉျထားသျောလညျး မေ ၃၀ ရကျသို့ ရှဆေို့ငျးခဲ့ရသလို ယခုဒုတိယအကွိမျ ရှဆေို့ငျးခဲ့ရခွငျး ဖွဈသညျ။ ONE Championship သညျ ရောဂါအခွအေနေ တညျငွိမျသှားမှသာ ပွိုငျပှဲမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ ထုတျပွနျမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ အောငျလအနျဆနျသညျ မဈဒယျဝိတျတနျး ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံကာကှယျပှဲအဖွဈ ပွိုငျဘကျဟောငျး ရုရှားနိုငျငံသား ဗဈတာလီ ဘဈဒကျရျှနှငျ့ ယှဉျပွိုငျထိုးသတျရမညျဖွဈပွီး ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈတှငျ ပထမဆုံးပှဲ ယှဉျပွိုငျထိုးသတျရနျ … Read more